‘मिस मंगोल’ ज्याङ्मुसँग लगनगाँठो कस्दै मुख्यमन्त्री – Wow Sansar
‘मिस मंगोल’ ज्याङ्मुसँग लगनगाँठो कस्दै मुख्यमन्त्री
January 16, 2021 124
काठमाडौं, ३ माघ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यही ११ माघमा लगनगाँठो कस्दैछन् । मुख्यमन्त्री राईको विवाहबारे उनको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ । तर, उनी कोसँग लगनगाँठो कस्दैछन् भन्ने खुलाइएको छैन ।
मुख्यमन्त्री राईको हुनेवाली को हुन् त ? विवाहको प्रशंग आएपछि धेरैलाई कौतुहलता लागेको हुन सक्छ ? मुख्यमन्त्री राईको विवाहको मिति पक्का भइसक्दा समेत युवतीको नाम गोप्य नै राखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री राई सन् २०१८ की ‘मिस मंगोल नेपाल’ ज्याङ्मु शेर्पासँग लगनगाँठो कस्न लागेका हुन् । ज्याङ्मु र मुख्यमन्त्री राईको प्रेम विवाह हो । मुख्यमन्त्री राई र ज्याङ्मुको उमेरअन्तर निकै फरक छ । प्रेममा उमेर र वर्गले छेक्दैन भन्ने भनाइलाई मुख्यमन्त्री राई र ज्याङ्मुले चरितार्थ गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरु करिब एक वर्षयता प्रेममा थिए ।
विदेशमा राजनीतिज्ञ तथा सरकारी उच्चअधिकारीहरुले मोडल तथा सेलिब्रेटीहरुसँग विवाह गरेको थप्रै उदाहरण छ । अमेरिकाको वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी दोस्रो पत्नी मेलनिया पनि एक चर्चित मोडल हुन् । अमेरिका र युरोपमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । तर, नेपालमा भने पहिलोपटक बहालवाला मुख्यमन्त्रीले मोडलसँग विवाह गर्न लागेको हुन् । यो नेपाली राजनीतिबृत्तका लागि सम्भवः पहिलो र नौलो हुनसक्छ ।
मुख्यमन्त्री राईको पर्खौली घर भोजपुर हो भने जाङ्मु संखुवासभाकी हुन् । उनी हाल काठमाडौंमा बस्दै आएकी छन् । उनका बाबु–आमा भने अमेरिकामा छन् ।‘मिस मंगोल नेपाल–२०१८’ उपाधि जितेसँगै ज्याङ्मु चर्चामा आएकी हुन् । त्यो बेलादेखि नै मुख्यमन्त्री राई र ज्याङ्मु नजिकिएको स्रोतको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राईले काठमाडौं र प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा शुभचिन्तक, राजनीतिककर्मी, उद्योगी र कर्मचारीलगायतलाई भोज दिने तयारी गरेको बताइएको छ । दृष्टिन्युज
Prevश्रीमानले विवाह भएको पाँच वर्ष सम्म पनि नछोएपछि ‘सु-साइड’ गरेकी प्रियाको त्यो नोट, जसले संसारलाई रूवायो‘
Nextॐ ॐ ॐ”धन लाभ हुनु अगाडि मिल्छ यस्तो सङ्केत, वेवास्ता नगरी ॐ ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस्, धन लाभ हुनेछ ।जय लक्ष्मी माता ।।
श्रीमान्‌को हत्या गरेपछि रगत लागेको चक्कु बोकेर प्रहरी कार्यालय पुगिन् ५० वर्षीया महिला
२ महिनादेखि कोमामा थिए, दाईले मनपर्ने परिकार चिकेन ल्याउँछु भनेपछि खुल्यो होश
‘दुःखीलाई नै दिन अनि ऋण लाग्दो रहेछ आमा’ बाकसको छोराले आमालाई लेखेको मन छुने चिठी
१० सेकेण्डको भिडि’योको मूल्य ७७ करोड, के छ त्यस्तो भिडियोमा
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1189)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (1101)
निर्मलाको ज्या.न लि.ने अ.पराधीको बारेमा यस्तो सूचना प्रहरीलाई आएपछि… (1041)